Waxaa Sii kordhaaya Musharixiinta iska diiwaan galinaayo Xarunta Villa Hargeysa – STAR FM SOMALIA
Magaalada Muqdisho waxaa weli ka socota isdiiwaan gelinta Musharaxiinta u tartameysa xilka Madaxweynaha Soomaaliya, maadaama dhowaan ay dhaceyso Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Xarunta Villa Hargeysa oo ah halka la iska diiwaan geliyo ayaa maalmahan ah mid mashquul badan, oo Musharaxiinta ay iska soo diiwaan geliyaan kana soo qaataan warqadooda cadeynta ah.
Ilaa iyo hada waxaa la diiwaan geliyay 10 Musharax, sida ay xaqiijiyeen Guddiga Doorashada Madaxweynaha, waxaana ay kala yihiin:-
1: Sheekh Shariif Sheekh Axmed
2: Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke.
3: Cabdiqaadir Cosoble Cali.
4: Maxamuud Maxamed Culusow.
5: Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
6:C/naasir Cabdulle Maxamed.
7: Bashiir Raagge Shiiraar
8: Amb. Maxamed Cali Ameeriko
9: Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole.
10: Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta dhagax dhigay wadada Via Mosco(Daawo Sawirada)